Indiyaatti seera lamummaa haaraya bahe mormuun itti fufe jira - NuuralHudaa
Indiyaatti seera lamummaa haaraya bahe mormuun itti fufe jira
Paarlamaan Indiyaa torbee dabre baqattoota biyyoota ollaa irraa gara Indiyaa seenaniif lammummaan akka kennamu seera hayyamu raggaasise. Seerri kun garuu baqattoota amantii Islaamaa hordofan ‘Muslima’ kan hin hammanne tahuun isaa mormii cimaa kaase.
Guyyaa labsiin kun raggaasifame irraa kaasee kutaa biyyattii garagaraatti morii cimaan kan geggeeffamaa jiru yoo tahu, Mormiin kun guyyaa har’aatis itti fufee jiraachuun dhagahame. Salaata Juma’aa booda Masjidoota biyyattii hedduu keessatti Muslimoonni diddaa wixinichaa mul’isan.
Magaalaa guddoo biyyattii Niwuu-Delhii tti poolisiin ummata mormii dhageessisaa ture irratti reebicha hamaa raawwatte, Akkasumas Namoota hedduus tohannoo jala oolchuuniis gabaafame.
Kutaa Uttar Pardesh magaalaa Lucknow keessattiis Salaata Juma’aa booda walitti bu’insi ummataafi poolisii jiddutti ka’e hordoduun, Gaaga’ama mudateen lubbuun nama 2 dabruu fi namoonni hedduun midhamanii jiru.
Hiriira mormii kana hordofuun magaalota biyyattii hedduu Keessa tajaajilli Interneetii addaan citee jiraachuus odeeyfannoon ni addeessa.
September 27, 2021 sa;aa 9:37 pm Update tahe